कोरोना संक्रमितमा नयाँ लक्षण, बिरामीको मुख पनि परीक्षण गर्न माग (अध्ययन रिपोर्टसहित) – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कोरोना संक्रमितमा नयाँ लक्षण, बिरामीको मुख पनि परीक्षण गर्न माग (अध्ययन रिपोर्टसहित)
कोरोना संक्रमितमा नयाँ लक्षण, बिरामीको मुख पनि परीक्षण गर्न माग (अध्ययन रिपोर्टसहित)
एजेन्सी- विश्वब्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको ब्यापकता जसरी बढ्दैछ, त्यसरी नै यसका लक्षणहरू पनि थपिंदै गएका छन ।
यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै कोरोना संक्रमित विरामीको उपचार प्रोटोलमा नाक, कान, घाँटी (ईएनटी) विशेषज्ञलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने रामोन वाइ केजल युनिभर्सिटी हस्पिटलका डा. जुआन जिमेनेज नेतृत्वको टोलीको ठहर छ ।
नेपाल भनेपछि मन नपराउने शक्ती कपुरले के छोरी श्रद्धाको विवाह नेपाली ठिटो रोहन श्रेष्ठसंग गर्न देलान ? श्रद्धाको विवाह नजिकिदै गर्दा बोले शक्त्ति
आखिर को हुन् यी युवक ? जसको प्रेममा नायिका केकी अधिकारी डु’बेकी छिन् (भिडियो)
अब म,रेका मान्छेलाई पनि पुनः जि,उँदो बनाउन सकिने डाक्टरको दाबी